Etu esi agwa Mac ka igu akwukwo | Esi m mac
Etu esi agwa Mac ka ogugu ederede
Eeh, Mac anyị nwere ọrụ ndị bara oke uru, mana anyị anaghị eji n'ihi na onweghị onye gwara anyị otu esi etinye ya n'ọrụ kwa ụbọchị. Na Storelọ Ahịa Apple, anyị nwere ike ịnara nkuzi banyere otu esi ebuli ọrụ anyị kwa ụbọchị, mana onye ọrụ ọ bụla nwere ụfọdụ mkpa yana n'ezie, taa enweghị usoro mmụta ọ bụla maka onye ọrụ ọ bụla na Mac. nyocha ihuenyo, mgbe anyị na-enwe ohere iji gụọ akwụkwọ ozi, lelee mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ ọ bụla. Ọrụ a nwere nkwarụ na ndabara. Ugbu a, anyị ga-akọwa ebe ịchọta ya na otu o si arụ ọrụ.
Apple kere n'ime ụdị nke akụkụ ahụ Ịnweta. Na mbu ebubere ya maka ndị ọrụ nwere ọhụụ ma ọ bụ nsogbu anụ ahụ. Y’oburu n’etiti ha, imara ihe m n’ekwu. Mana imirikiti ndị ọrụ anaghị eji ya ma karịa ihe niile, ha amaghị ihe ọ nwere ike inye.
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọta ọrụ ahụ. Nke a dị na Mmasị Sistem. Ugbu a, anyị ga-enyocha ma ọ bụ pịnye nnweta. Ga-ahụ ya site na okirikiri na-acha anụnụ anụnụ na onye na-acha ọcha. Ozugbo ị banyere, ị ga-ahụ ọrụ dị iche iche nke ezinụlọ nyere n'iwu. Anyị ga-achọta Na-ekwu okwu n'akụkụ aka ekpe nke igbe mmasị anyị. Ozugbo ịpịrị Okwu, a na-emepe ọrụ dị iche iche n'aka nri na ọrụ dị iche iche. Iji mee mkpọchi, anyị ga-pịa nhọrọ:
Gwuo ederede ederede ahọrọ site na ịpị igodo ahụ
Site na ndabara, ụzọ mkpirisi ahọpụtara bụ: nhọrọ + mgbapụ, ma pịa Gbanwee igodo ... anyị ga-gbanwee ndabara shortcut. Na nke ahụ, windo ọhụrụ na-apụta, ebe anyị ga-pịa ụzọ mkpirisi igodo kwesịrị ekwesị maka ihe masịrị anyị ma pịa nnabata.
Ugbu a, naanị ihe anyị ga-ahọrọ bụ olu anyị chọrọ ịgụrụ anyị. Anyị ga-elerịrị anya n’elu submenu ahụ na-ekwu okwu. N'ebe ahụ anyị na-ahụ olu nke sistemụ ahụ, na nke m Monica ma ọ bụrụ na anyị pịa ndọpụta ahụ, anyị gbanwere na mmasị anyị.
N'ikpeazụ, mee ule: họrọ ederede ma pịa ụzọ mkpirisi igodo nyeere aka, ị ga - ahụ otu ọ ga - esi gbasaa ozi ahụ nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Etu esi agwa Mac ka ogugu ederede
Troga na Tipard 3D Ntụgharị, nweere onwe gị ugbu a maka obere oge
Apple na-ezipụ akwụkwọ ịkpọ oku maka WWDC 2017 bụ isi okwu